Maraakiibta - Gemic
Shixnad Degdeg ah - USD 35
shixnadaha Express caadi ahaan qaadan maalmood 3-4 dhalmo iyo isha loogu hayn karo online tallaabo jid kasta. Baakadaha waxaa si buuxda caymis. Saxiixa A waxaa ku dul bixinta loo baahan yahay. Keenitaanka yihiin Isniinta ilaa Jimcaha inta badan dalalka. No PO sanduuqyada, NUSOJ ama cinwaanada FPÖ (UAE, Saudi Arabia iyo Kuwait mooyee) waxaa loo isticmaali karaa. Fiiro gaar ah: Haddii aad 'saxiix ku leedahay faylka', fadlan wac EMS si aad ugala noqoto oggolaanshahan. Xirmooyinka la keenayo iyada oo aan la saxiixin, sababtoo ah 'saxiixa feylka' ma dabooli karo sideheena caymiska
Heerka Diiwaangashan ee Diiwaangashan - USD 7
Dhamaan jawharadyada la muujiyey sida 'la heli karo' ayaa ku jira kaydka waxayna diyaar u yihiin rar degdeg ah. Amarada waxaa lagu shaqeynayaa 1 maalin shaqo gudahood. Laga bilaabo Isniinta ilaa Jimcaha.
Macluumaad dheeraad ah Wadamo badan shixnadaha sida saxda ah loogu dhawaaqay waxay ku xiran yihiin canshuuraha canshuuraha iyo canshuuraha. Boostada diiwaangashan ayaa qaadata muddo dheer, laakiin waxay caadiyan iska ilaalisaa khidmadaha dheeraadka ah. Waxaan ku faraxsanahay inaan u soo dirno amarkaaga "Hadiyad", laakiin fadlan ogow inaanan xakamaynayn kharashyada dheeraadka ah ee laga yaabo inay ka dhacaan waddankaaga.
Biilasha Dhammaan xirmooyinka ka socda GEMIC waxaa ku jira qaansheeg buuxa. Fadlan nala soo xiriir hordhigtay inta aad si haddii aad u baahan tahay qaansheegta a kartoo ama qaansheegta ma at dhan.